Ingxaki enkulu olubonakalayo baneengcamango yokubini yeenqobo uphando kukuba polarizes ingxoxo. Ukubiza njengesifo Emotional okanye Ngcamlani, sies, kwaye Ixesha nentlama neenqobo ezi zifundo kunye nkohlakalo oyinyaniso ngendlela yokuba akukho luncedo. Ukuya yokucinga yezibini kunye nolwimi wokohlula asiyo ikhwelo kuthi ukusebenzisa ulwimi bhutyu ukufihla ukungaziphathi. Kunoko, kuyingcamango eqhubekayo yokuziphatha kuya, ndiyacinga, kunokukhokelela ulwimi ngononophelo kwaye ngqo. Ngaphezu koko, kuyingcamango eqhubekayo yeenqobo uphando icacisa ukuba wonke-nkqu abaphandi abenza umsebenzi sele ingqalelo "ngokweenqobo" -should kuzama ukwenza ngcono kwanokuba ngokweenqobo eseleyo kumsebenzi wabo.
A inzuzo lokugqibela ukufuduka ukucinga rhoqo kukuba ikhuthaza ukuthobeka yengqondo, leyo ezifanelekileyo ebusweni imingeni yeenqobo ezisesikweni enzima. Imibuzo yeenqobo uphando kweminyaka lwedijithali kunzima, yaye akukho mntu elinye kufuneka baqiniseke ubuchule wakhe ukuxilonga ikhondo elichanekileyo amanyathelo.